Fa Ahoana no Ahatafavoahan’ny Malagasy Miaina Amin’ny Vola Kely? Amin’ny Fahaiza-Mamoron-Javatra Maro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2015 19:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, čeština , Italiano, English
pikantsarin'ny sombin'ny “Ady Gasy”, lahatsarim-panadihadiana amin'ny karataka ataon'ny olona eto Madagasikara hahazoana vola [mahavita iray volana], notontosain'i Lova Nantenaina hita YouTube
Nitohitohy ny vintan-dratsin'i Madagasikara tao anatin'ny taona vitsivitsy. Mbola mitolona dia mitolona hiavo-tena ny toekareny taorian'ny rivodoza sy ny krizy politika misesisesy. Efa zatra ny mikarataka ny Malagasy na dia henjana dia henjana aza ny fanamby miandry azy.
Manolotra tahirin-kevitra momba izany fomba fiainana mampiavaka ny kolontsaina sy ny fiaraha-monina eto Madagasikara izany indrindra ny Ady Gasy. Amin'ny fitsipahana ny fanjifana diso be tafahoatra izay manimba ny tany mandroso, fotopotorin'ny sarimihetsika ny fomba nandraisan'ny mponin'i Madagasikara ny fiainana tia mitahiry [mahay mamadi-javatra iray tsy ilaina ho azo ampiasaina zavatra hafa indray] sy fahazakana tena ao anatin'ny krizy ara-toekarena manerantany, amin'ny fampiasana ny hakingan-tsaina ho fakàna aingam-panahy.
Na dia eo aza ny fahantrana raiki-tampisaka eto Madagasikara, ny kere ary ny tondradrano, dia tsy mitady fitserana avy amin'ny mpijery ny lahatsarim-panadihadian'i Lova Nantenaina, mpanatontosa sarimihetsika mijoro sy misandratra. Ny ifantohany kokoa dia ny fomba handresen'ny vahoaka malagasy ny tolony isan'andro, araka ny hita ao anatin'ny mason'ny ankizy iray (ny mpandray anjara voalohany ao amin'ny lahatsarim-panadihadiana). Mirona mankany amin'ny tsara ny ankamaroan'ny fijerin'ny mpanatrika sy ny mpanao tsikera. Ilay Frantsay mpanao tsikera filma Rémy Roche mitatitra ny fomba nataon'ny fanadihadiana nampiseho ny hakingan-tsaina tamin'ny antsipirihany madinika :
Ny tian'ny Ady Gasy haseho, fomba fiteny maro mpiteny eto, dia ny mikarataka. Hainy ny miavo-tena. tsy fanary izany “briquet” fanary izany, azo amboarina sy fahanana gazy indray. Ny kodiarana tonta avadika ho lasa kapa, ny takamoa maty lasa atao jiron-tsolika ary ny kapoaka avadika ho kilalao vita an-trano.
Sehatra hita ao amin'ny lahatsarim-panadihadiana “Ady Gasy”
Ho an'ny Malagasy, zava-dehibe tokoa ny nanomezan'ilay filma ny zavamisy marina ary tsy mampiseho ny olom-pirenena ho lasibatra. Kalabasivava, Malagasy mpikaroka iray monina ao Frantsa, manazava ny antony:
Fanomezam-boninahitra mampangovingovitra ho an'ny faharetana sy ny herim-pon'ny vahoaka navela ela irery sy miatrika faneriterena sarotra dia sarotra isan-karazany
Jereo ny sombiny eto ambany :
Resy lahatry ny vinan'ny mpanatontosa ny sarimihetsika i Tomavana, olom-pirenena malagasy izay nanatrika ny seho manerantany voalohany ilay lahatsarim-panadihadiana tany Soisa:
Nanome fitenenana ny vatolampy iorenan'ny fiaraha-monina malagasy mafy i Lova Nantenaina [mpanatontosa sarimihetsika] : ny vahoakany. Tsy mirentirenty ary tsy manasohaso, ny fijery atolony dia fitsofohana ao amin'ny fiainana andavanandron'ny olon-tsotra ao Madagasikara. Asaina ny mpijery hivezivezy any amin'ireo sakeli-dalana miolikolika, any amin'ireo fokontany ahitana ireo toeram-piasana madinika, ahitana ireo asa madinidinika ahitana fiainana mangotrangotraka sy fanantenana mipotrapotraka, tany lonaka amin'ny faharetan'ny vahoaka malagasy.
Lova Nantenaina nandritra ny fotoana namoahana voalohany ny filma nataony. Nahazoana alalana
Sandrine Marques, ao amin'ny blaoginy ao amin'ny Le Monde, nanampy fa tena ao anatin'ny mari-panondroana tanteraka ny malagasy sy ny filma ny fahaiza-miteny [mitantara]:
Ny fahaiza-miteny mba handroahana ny fahantrana ary fankalazana ny hatsaran'ny firaisankina ao amin'ny firenena. Izay no ventin'ny fandresen-dahatr'ity fanadihadiana manetry tena tahaka ny lohahevitra dinihany ary maneho amintsika ireo karazana karataka eto Madagasikara. Manana dika maro ao amin'ny kolontsaina malagasy ny ady gasy ary mihatra any amin'ny fanao ara-kolontsaina, ara-pambolena ary ara-panafody.
Mahagaga, tsara ihany ny manamarika fa mihamivelatra miroborobo ny sehatry ny filma malagasy na dia eo aza ny fitarazohana ara-toekarena. Colin Dupre ao amin'ny INA Global manazava izany fifanoheran-javatra izany:
Eto amin'ny Nosy Mena, tsy misy intsony ny efitra lehibe fandefasana sarimihetsika ary tsy misy ny rafi-panjakana miasa ho amin'ny fampandrosoana ny sehatr'asa, noho ny tsy fisian'ny finiavana politika sy ny tohana ara-bola… avy any amin'ny sarimihetsika fohy no iavian'ny tena fihavaozana. Mora kokoa ny sarimihetsika fohy, ary tsy voatery hitady fanohanana ara-bola avy any amin'ny firenena mpanankarena ny mpanatontosa. Amin'izay fotoana izay, rehefa tsy voatery hanaraka ny teritery ara-panehoan-tsehatra sy ara-bikabika ny sarimihetsika fohy dia afaka amin'ny lasitra apetraky ny sarimihetsika lava… Ankoatra izay, misy dia misy ny fifanampiana ara-talenta mandritra ny fanatontosana azy ao amin'ny filma malagasy. Ity ny iray amin'ny sehatr'asa artistika vitsy eto Madagasikara ka miara-miasa ny mpisehatra mba hahazoana vokatra tsara.
Mazava dia mazava ny kinendrin'i Lova Nantenaina ho vitan'ny filma. Hoy ny najorony tamin'ny antsafa farany indrindra nataony:
Adidintsika ny manao izay ananan'ireo olo-maherin'ny andavanandro ireo toky
Mivoaka ao Eoropa sy eto Madagasikara hatramin'ny volana jona ho avy izao ilay lahatsarim-panadihadiana. Ato ny lisitry ny toerana ahafahan'ny tsirairay manenjika fotoam-pandefasana azy.
2 herinandro izayKenyà